admin – Nya Hmwe Pann
admin ! Без рубрики November 19, 2019
Modern and efficient managing with Datarooms
admin သုတ November 18, 2019
Management will be something that can increase the efficiency associated with an entire company, increase profits plus affect the popularity of the product, providing good quality service and establishing the values of the enterprise. Today, it is just impossible to Read more…
admin သုတ November 9, 2019
It is notastraightforward job forastudent to arrangeaanalysis paper of the highest high quality, it takes plenty of efforts, energy and dedication. Instance: My first job interview publish layoff that I actually was enthusiastic ultius Read more…
Choosing Effortless Secrets In speedy paper review expertpaperwriter
admin သုတ November 2, 2019
For IEEE to proceed sending you useful info on our services and products, please consent to our updated Privateness Policy. There are respective methods wherein you’re going to be able to cover enterprise requirements by citing variables of job whereas Read more…
ကျွန်နော့် မရီး နာမည်က မစု နာမည် အရှည်တော့ မပြောတော့ဘူးဗျာ ကျွန်နော် က ကျွန်နော့် အကို အိမ်မှာ အလုပ်လုပ်ရင်းနေတယ် ကျွန်နော် နဲ့ မစု ဖြစ်ပျက်တာလေး တချို့ ပြောချင်လို့ပါ ။ နာမည်အရင်းတွေ အလုပ်အကိုင်တွေ တော့ အကုန်မပြောတော့ဘူးဗျာ ။ ကျွန်နော့် နာမည် ကို ဖိုးဇော်လို့ ပဲ မှတ်ထားလိုက်တော့ ။ကျွန်နော့် အကို အလုပ် နဲ့ နယ်ဆင်းသွားပီး တစ်ပတ်လောက် အကြာပေါ့ ။ မနက်ပိုင်း Read more…
admin cele, hot news, news, popular
image ဟိနျးဝယေံနဲ့ တှဲပွီး အနုပညာလှုပျရှားမှုတှမွေငျရဦးမယျ့ စိုးပွညျ့သဇငျ image အသကျ ၂၇ နှဈပွညျ့ပွီဖွဈတဲ့ စိုးပွညျ့သဇငျ Photo: Paing Phyo Thu စိုးမွတျသူဇာကတော့ Now Ever ရုပျရှငျဇာတျကားကွီးကို အားပေးရငျး သူ့ရဲ့ ခံစားခကျြတှေ ရငျဖှငျ့ပွောပွလာပါတယျ။ ကိုယျတိုငျလညျး မကျြရညျကခြဲ့ရတဲ့ ဇာတျကားဖွဈတယျလို့ ဆိုပါတယျ။ ‘’ဇာတျလမျးထဲမှာ မငျးသားဆေးရုံက ဆငျးလာပွီး အိမျမှာ သူငယျခငျြးတှနေဲ့ ညစာစားတော့ မငျးသား နဲ့ မငျးသမီး တဈယာကျနဲ့ တဈယာကျ အပွနျအလှနျ ကွညျ့နတေဲ့ အခနျး Read more…
၁၉၃၃ ခုနှစ်၏ အေးမြသော ဆောင်းညတွင်ဖြစ်ပါသည်။ မီးလင်းဖိုမှ လွန့်လူးသောမီးရောင်သည် ဖြာကျလျက် ရှိနေသည်။ ၁၈ နှစ်သမီးလေး ထွေးငယ် သည် ခိုက်ခိုက်တုန်လျက်ရှိသည်။ ဆောင်းကြောင့် မဟုတ်၊ ကြောက်ရွံ့စိတ်ကြောင့်တည်း။ သူမတစ်ကိုယ်လုံးတွင် အဝတ်အစားမရှိ၊ မီးရောင်သည် သူ့ကိုယ်ပေါ်တွင် ပြေးလျက်၊ မွှေ့ယာခုံကြီးပေါ်တွင် ကွေးကွေးလေး၊ ခုံပေါ်တွင် ဒူးထောက်လျက်သားမှ သူ၏ခန္ဓာကိုယ်အပေါ်ပိုင်းသည် ခုံ နောက်မှီ အထက်တွင် တွဲလောင်းဖြစ်လျက်ရှိသည်။ သူမ၏ ရင်သား များသည် တွဲလောင်းဖြစ်လျက်၊ ခြေထောက်များသည် ခုံ လက်ရမ်းတစ်ဖက်စီတွင် ကျဲကားလျက်၊ သူ့ အဖုတ်နှင့် Read more…
အို အပြင်​ကိုမထွက်​​ပေမယ့်​ ရင်​ထဲမှာအလိုလိုဖြစ်​လာတဲ့ စကားရယ်​ပါ။ ​အေး​လေးရဲ့ မမဟိုမှာ မမဘဲ လို့​ပြောပြီး​မေး​ငေါ့ပြတာကိုကြည့်​ မိတဲ့အခါ။ ကျမတို့ရဲ့ ​ဘေးနှစ်​ခုံ​ကျော်​​လောက်​ စားပွဲမှာထိုင်​ပြီး ဘယ်​အ ချိန်​ထဲက ကြည့်​​နေမှန်းမသိတဲ့ သူ့ကို​တွေ့လိုက်​ရလို့ ရင်​ထဲဖိုပြီး ထွက်​လာတဲ့ ရင်​ထဲကအသံပါ။ ကြည့်​​နေပုံကလဲ စူးစူးစိုက်​စိုက်​ ကြည့်​​နေတဲ့​နေရာကလဲ ကျမ ရဲ့ ထည်​ဝါလှတဲ့ တင်​သား​တွေဆီဆို​တော့လဲ ရင်​မဖိုဘဲရှိမလား အဲ့ ​ကောင်​​လေးကို မှတ်​မှတ်​ထင်​ထင်​ဖြစ်​​နေတာ သုံး​လေးရက်​ ရှိ​နေပြီ။ အစက​တော့ ​အေး​လေးကိုပစ်​မှတ်​ထားတာလို့ထင်​လို့ ​ဟေ့ ​အေး​လေး ဟို​ကောင်​​လေး ဒို့​နောက်​ကိုလိုက်​​နေတာ နှစ်​ရက်​သုံး ရက်​​လောက်​ရှိပြီ။ညီး​ကောင်​​လေးနဲ့ Read more…
admin သုတ November 1, 2019
Students usually get furious when they don’t get good grades for writing braveness essays for many of them thinks that that is an easiest topic on earth but the matter of the fact is they are flawed, you cannot write Read more…